काेराेना भाइरसले कसरी ज्यान लिन्छ? भाइरस सर्न नदिन के गर्न सकिन्छ? – ईमेची डटकम
कुनै पनि virus ले (Coronavirus ले पनि) आँफै नयाँ virus बनाउन सक्दैन। त्यसको लागि virus ले पशुपन्छी, मानिस वा अन्य जीवको कोषको भर पर्नु पर्छ। तर शरीरको कोषले जे पायो त्यहि आँफु भित्र छिर्न दिंदैन। त्यहि भएर Virus ले मानबको कोषलाई झुक्याउन आफ्नो शरीरको बाहिरी भागमा रहेको protein तत्व प्रयोग गर्छ जसले गर्दा हाम्रो शरीरको कोष आफ्नै केहि भाग होला भनेर झुक्किन्छ र virus लाई छिर्न दिन्छ।
Coronavirus फोक्सोको कोष भित्र छिरेपछि कोष भित्रको genetic material प्रयोग गरेर अन्य धेरै virus बनाउँछ र उक्त कोषको अन्त्य गरिदिन्छ। अनि जति धेरै virus भए उति नै धेरै फोक्सोको कोष मर्ने हुन थाल्छ। त्यसपछि सोहि मरेको कोष नजिक सुन्निने र तरल पदार्थ जम्ने प्रक्रिया चल्छ। यसले गर्दा फोक्सोमा oxygen रक्तनलीमा गएर रगतमा oxygen सिंचाई गर्ने प्रक्रिया ठप्प हुन्छ र फोक्सो आँफै असक्त हुँदै जान्छ। यस्तो बेलामा समयमै ventilator machine प्रयोग गरेर फोक्सोलाई सुचारु राख्ने र oxygen रगतमा पठाउने गर्नु पर्छ। यसो गर्दा पनि कसैको शरीरले Oxygen पर्याप्त नपाएर अन्य अंगहरुलाई कम oxygen मा काम गर्नु पर्ने हुन्छ। पहिलै देखि स्वस्थ र तन्दरुस्त नभएका शरीरले यस्तो oxygen कम हुने अवस्था थेग्न सक्दैन र ज्यान जान सक्छ। त्यसैले प्राय ५०-६० नाघेका, पहिले देखिनै diabetes, blood pressure आदिको समस्या भएर अंगहरु थाकिसकेका, चुरोट पिउने बानि भएका र immune शक्ति कम भएकामा Coronavirus ले छिटो असर गर्ने हुन्छ।
– सुरुमा Corona Virus लाई (2019-nCoV) नामकरण गरिएको थियो। प्राय कुनै रोगको महामारी फैलिएपछि उक्त नामसंगै कुनै एक देश, जात, भाषा र अनुहारलाई जोडेर सामाजिक कलंक अर्थात् social stigma हुने, सामाजिक बहिस्कार हुने डरले पहिले चलिरहेको नाम परिवर्तन गर्ने गरिन्छ र नयाँ scientific नाम दिइन्छ। यहि pattern पछ्यौन्दै coronavirus को नाम पनि COVID 19 मा परिवर्तन गरियो।